Windows DVD Kan sameeyey,
Download & Ku rakib
Top 5 lagu bedelan karo Kan sameeyey Windows DVD
Waxaad tahay mid aad u dooneysa in la isticmaalayo OS Windows iyo Windows DVD G gubanaya DVD ah. In Windows Vista iyo Windows 7, Windows DVD, Uumahaaga ayaa la heli karaa si ay u soo bixi, rakibi iyo tartamo gubanaya DVD la files warbaahinta aad u baahan tahay si ay u gubaan. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan haddii la dhaafi karin in Windows DVD Kan sameeyey, sababo la xiriira arrimo dhibaato kala duwan oo waafaqsan in qaab warbaahinta. Sidaas oo kale, Windows 8 / 8.1 maqan Windows DVD Kan sameeyey, oo helay halkan ku xayiran dad badan oo aan u leedahay in xal kale la mid ah codsiga by default. Sidaas, halkan waxaan ka dhigay a collection of 5 kale oo sare si Windows DVD Kan sameeyey iyadoo ay OS taageeray, link download iyo faa'iidooyinka badan Windows DVD abuuray. Si fudud Waxaad samayn kartaa gubasho DVD aad u fudud oo siman oo isticmaalaya wax kale oo Kan sameeyey Windows DVD ka mid ah liiska hoos ku qoran.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa codsi in badan loo badalo kartaa video files iyo sidoo kale gubi DVD. Waxay noqon kartaa xalka kama dambaysta ah ee Windows DVD Kan sameeyey ay sabab u tahay qaabab file kala duwan waafaqsan. Waxaa helay version ugu danbeeyay ee la jaan qaada OS ugu dambeeyey. Qaybta gunno ah DVD this software gubanaya waa Converter video ah. Waxa ay taageertaa qaabab faylka fara badan oo iyaga loogu badalo karaa inta u dhaxaysa si ay u dareemaan in aad lacag la'aan ah iyaga oo isticmaalaya sida loo baahan yahay. Maxay noqon kartaa xal kale oo lagu Windows DVD Uumihiisa
Wondershare DVD Kan sameeyey Isbarbar:
Wondershare DVD Creator Waa mid ka mid ah codsiyada DVD gubi ugu cajiibka abid in helay hits ugu on download iyo aad u hesho dib u eegista badan oo hab wanaagsan. Waxay noqon kartaa bedelka qiimo iyo xataa kale ugu wanaagsan ee software DVD gubashadii caan ah, Windows DVD abuuray. Waxa ay taageertaa badan oo kala duwan OS Windows ka iyo Mac. Waxaad ka heli kartaa ugu lagu shido DVD aad waafaqsan qaab faylasha. Maxay noqon kartaa xal kale oo lagu Windows DVD abuuray.
Guba DVD cajalladaha leh in ka badan 150 qaabab file ee files warbaahinta.
Waxaa gubi karaa superfast oo aan wax dhibaato ah.
Saamaynta kala duwan oo music asalka u ah slideshow sawir xusuus.
Hel mawduucyada aad u badan oo leh arrimo kala duwan oo Menu u DVD samaynta kaamil ah.
Qalabka ayeey u nahay 'reebi ilaa files aad warbaahinta hortiisa ka ololaya.
Kala duwan qaabab DVD soo saarka ayaa la heli karaa. sida DVD disc, files ISO, iwm
3. Ashampoo Gubidda Studio 6 FREE
Waxaad ku yaacaya u DVD kale codsiga in Windows DVD Kan sameeyey gubanaya; la kulmo calaamada xog codsiga ku shaqeeya weyn u DVD Gubidda, Ashampoo Gubidda Studio 6 BILAASH. Si fudud aad ka heli kartaa CD soonka iyo siman gubashada, Blu-ray ama DVDs gubanaya ee click ah by this software ool ah oo awood leh. Maxay noqon kartaa xal kale oo lagu Windows DVD Uumihiisa
Guba aad CD-yada, DVD-yada iyo cajalladaha Blu-ray xawaare ultrafast ah.
Guba si aad qaabab disc quman loogu soo saarka iyo talooyin labada cajalladaha.
Xawaaraha gubashadii Automatic iyo fursado kale oo qabow aad u.
Kaaliyaha Media iyo dhibaatooyinka Hardware dhib waa inaad.
Masixi kala duwan DVDs- CD-RWs / DVD-RAM / BD-RES / DVD + RWs / DVD-RWs iwm
In ka badan 1,700 oo DVD, CD Blu-ray iyo gubidda ka heli kartaa taageero isku-dhafan.
PowerISO waa mid ka mid ah fursad kale oo fiican in Windows DVD Kan sameeyey in gubi kara sida DVD aad u baahan tahay. Waxaa aad u fiican in ay soo gudbiyaan ka baaraandegidda files ISO. Waxaad ka heli kartaa taageero buuxda aad ISO iyo IMG files disc. Waa maxay sababta aynu dooranay PowerISO in midba Windows DVD Uumihiisa
Taageer tiro balaadhan oo ah qaabab file u CD / DVD / BD-ROM ie ISO, QASHIN, NRG, CDI, DAA, iwm
Macdan kartaa file ISO ka dib markii furitaanka.
Hel gubi ugu xirfadeed si ay u gubaan CD, DVD, ama Blu-Ray disc.
Qaabab Media ee qaabab file fara badan waxaa taageera.
Waxa uu oggolaan karaa si ay u gubaan cajalladaha Downlaods iyo user ugu saaxiibtinimo interface.
Nero 2014 Platinum Saaxiib kaamil ah Diintiinii marka aad ku sugan tahay dhibaato la Kan sameeyey Windows DVD. Waxaad ka heli kartaa faa'idooyinka in aad rabto in DVDs gubanaya. Qaybtii fursadaha iyo files kala duwan ee waafaqsan bedeli karaa isticmaalka Windows DVD abuuray. Halkan waxaan si fudud u tilmaami karaan in sababta Nero 2014 Platinum noqon kartaa kale in Windows DVD abuuray.
Guba aad files warbaahinta in kasta oo qaabab DVD.
Liis dheer oo la gelin oo ay taageerayaan iyo qaabab file maqnaan gubanaya.
Waxaad ka heli kartaa 1 Click si loogu badalo oo gubi cajalladaha u isticmaalka qalabka.
Waxa ay taageertaa Qalabka telefoonada gacanta iyo geeyo TV.
Easy iyo superfast DVD ku gubanayso.
> Resource > Windows > Download Windows DVD Kan sameeyey Alternative for Free